Daniel Toroitich arab Moi - BBC Somali
Daniel Toroitich arab Moi
Xaaladaha qeexaya nolosha madaxweynihii hore ee Kenya Moi
Ku dhowaad rubuc qarni, Daniel Arab Moi wuxuu haystay siyaasadda kenya
Wuxuu awoodda la wareegay 1978 ka dib geeridii madaxweyhihii ugu horreeyay Kenya, Jomo Kenyatta
Xilligii uu ku cusbaa xilka, wuxuu ku tiirsanaa shacabka isagoo adeegsanayay hal ku dhigyo iyo mashaariic uu dadka isku baray. Balse isku deygii lagu afgembin rabay 1982-dii ka dib, Moi wuxuu isu bedelay keligii taliye kaas oo caburiyay xuriyadda dadka. Wuxuu dhashay 2 Sebtember 1924, wuxuuna ka soo jeeday qoys beeraley ah oo deggan Baringo, Galbeedka Kenya.
Waa kuwan marxaladihii ugu muhiimsanaa muddadii uu xilka hayay, madaxweynihii ugu wakhtiga dheeraa Kenya
Wuxuu ka qeybgalay Shirkii Lancaster House ee London, halkaas oo ah meesha lagu qoray dastuurkii qabyada ahaa ee Kenya, kaas oo shacabka Kenya siiyay aqlabiyadda Gole baarlamaan.
Madaxweynihii hore Jomo Kenyatta ayaa u magacaabay madaxweyne ku xigeenkii seddaxaad. Wuxuu xilkaas hayay 11 sano
Waxaa loo dhaariyay madaxweynaha Kenya, ka dib geeridii Jomo Kenyatta. Sannadkaa ka dib, wuxuu siidaayay dhammaan maxaabiistii siyaasadeed oo uu ka mid ahaa qoraaga caanka ah, Ngugi wa Thiong'o.
Dowladdiisa waxay fashilisay iskudey afgembi oo ay sameeyeen askar ka tirsanayd ciidamada cirka. Waxay arrintaas dhacday isbuuc ka dib markii baarlamaanka uu ansixiyay in dalka uu hal xisbi ka jiro. Tobannaan siyaasi ayaa la xiray bil ka dib dhacdadaas.
Wuxuu billaabay hannaanka waxbarashada ee 8-4-4 taas oo dad badan u arkeen dhaxal uu ka tagayay
Wuxuu gubay 12-tan oo fool maroodi ah 1989-kii si uu wacyigelin ugu sameeyay in ka ganacsiga foosha ay tahay sharcidarro.
Wuxuu dib u soo celiyay qodobkii dastuurka ee dhigayay dimuquraadiyadda iyo axsaabta badan, iyo xadididda wakhtiga madaxweynaha, isagoo ka jawaabayay cadaadiska dadkii dimuquraadi doonka ahaa iyo beesha caalamka.
Wuu tartamay wuxuuna ku guuleystay doorasho ay xisbiyo badan ka qeybgaleen muddo 20 sano ah - markii ugu horreysay ee uu wajahay loolan xilka madaxtinimada ah.
Wuxuu xilka ku wareejiyay madaxweyne Mwai Kibaki ka dib 24 sano oo xilka uu hayay, oo dhaqaalo aan kobcin iyo musuq joogto ah uu hareeyay.
Maxkamad ayaa ku amartay inuu bixiyo hal bilyan oo shilling (10 milyan oo dollar/7.7 milyan oo boonka Ingiriiska ah) taas oo magdhow u ahay in si sharci darro ah uu ku qaatay 53 ekar oo dhul oo ay lahayd haweeney carmalo ah.
Wuxuu ku dhintay isbitaal ku yaalla Nairobi ka dib muddo uu xanuunsanaa.
Waxaa soo saaray Muthoni Muchiri, Anthony Makokha iyo Juliet Njeri
Waxaa hagaajiyay Olawale Malomo, Purity Birir
Waxaa naqshadeeyay Olaniyi Adebimpe, Millie Wachira
Lahaanshaha sawirka: AFP/Getty Images
La wadaag boggan asxaabtaada
Ku sii baahi Twitter-ka
Ku sii baahi Facebook
Ku sii baahi WhatsApp-ka
Ku sii baahi email
Copyright © 2020 BBC. BBC-du kama mas'uul aha waxyaabaha ku qoran bogaggan kale ee debadda Nidaamka aan ula dhaqanno xidhiidhada baraha debadda